चोरको चर्तिकला देखेर प्रहरी नै तिनछक, खोज्दाखोज्दै ससुराली पुगेपछि यसरी खुल्यो पोल — Sanchar Kendra
१नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
२सकियो नेपाली काँग्रेस पदाधिकारी बैठक, के-के विषयमा भयाे छलफल ?
३एकैदिन ९० जनामा देखियाे कोरोनाकाे संक्रमण
४इन्धन अभावले श्रीलंकामा विद्यालय बन्दको घोषणा
५नेकपा (बहुमत) निकट युवा जनस्वयंसेवक नेपालको राष्ट्रिय भेला काठमाडौँमा सुरु
६पदाधिकारी सहित स्थायी समिति र पोलिटब्यूरो टुङ्गो लगाउन प्रचण्डलाई अख्तियारी
७रामेछापमा बस दुर्घटना- १३ जनाको मृत्यु, २४ घाइते, नाम्लिस्टसहित
८भारतमा भेटियो कोरोनाको नयाँ सब–भेरियन्ट
९पेट्रोल र डिजेलमा फेरी मूल्यवृद्धि, अब लिटरलाई कति ?
१०इण्डिगोका धेरै कर्मचारी एकै पटक विरामी बिदा लिएर एअर इण्डियामा अन्तर्वार्ता दिन गएपछि.…
११पैसा नभएर इन्धन आपूर्ति रोकिन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आयल निगमले लेख्यो यस्तो पत्र
१२विनोद शाही मृत्यु प्रकर : अछाममा तनाव, १२ प्रहरी सहित् प्रदर्शनकारी घाइते
चोरको चर्तिकला देखेर प्रहरी नै तिनछक, खोज्दाखोज्दै ससुराली पुगेपछि यसरी खुल्यो पोल
घोराही । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले चोरी भएको १७ लाख रुपियाँ बराबरको नेपाल टेलिकमको रिचार्ज कार्डसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ ।
रिचार्ज कार्ड चोरी गर्ने रोल्पाका दलबहादुर पुनलाई पक्राउ गरी दाङ प्रहरीले घोराहीमा सार्वजनिक गरेको हो । दाङ प्रहरीले बिहीबार बिहान घोराहीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बरामद गरिएका रिचार्ज कार्डसहित पुनलाई सार्वजनिक गरेको छ ।
रिजार्ज कार्डहरू चोरेर प्यूठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका ७ स्थित ससुराली घरमा लुकाई राखेको अवस्थामा फेला पारेपछि प्रहरी नै तिनछक परेको छ ।
रोल्पा जिल्लाको माडी गाउँपालिका २ स्थायी घर भएका २१ वर्षीय पुनले असोज २३ गते नेपाल टेलिकमको १७ लाख रुपियाँ बराबरको रिचार्ज कार्ड चोरी गरेर फरार भएका थिए । रिचार्ज कार्ड चोरी भएको २१ दिनपछि कात्तिक १३ गते दाङ प्रहरीले पुनलाई रिचार्ज कार्डसहित रंगेहात पक्राउ गरेको हो ।
पुनलाई रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका २ बाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्णहरि शर्माले जानकारी दिए । पुनले थवाङमा रिचार्ज कार्ड बिक्री गर्दै गरेको अवस्थामा प्रहरीले रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।
पुनलाई पक्राउ गर्न दाङ प्रहरीले रोल्पा र प्यूठान प्रहरीसँग पनि समन्वय गरेको थियो । ईलाका प्रहरी कार्यालय थवाङ रोल्पाको सहयोगमा पुनलाई पक्राउ गरी प्रारम्भीक अनुसन्धान गर्ने क्रममा चोरी भएका रिजार्ज कार्डहरू ससुराली घरमा भेटिएको हो ।
सकियो नेपाली काँग्रेस पदाधिकारी बैठक, के-के विषयमा भयाे छलफल ?
रामेछापमा बस दुर्घटना- १३ जनाको मृत्यु, २४ घाइते, नाम्लिस्टसहित
पेट्रोल र डिजेलमा फेरी मूल्यवृद्धि, अब लिटरलाई कति ?
इण्डिगोका धेरै कर्मचारी एकै पटक विरामी बिदा लिएर एअर इण्डियामा अन्तर्वार्ता दिन गएपछि.…
पैसा नभएर इन्धन आपूर्ति रोकिन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आयल निगमले लेख्यो यस्तो पत्र